Faarax Sheekh Cabdiqaadir “Qoondeynta kuraasta deegaanada waa arrin qatar ah” – Kalfadhi
Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdqaadir oo ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka Federalka oo maanta ka hadlayay kulanka baarlamaanka ayaa ka digey qaabka loo qeybinayo deegaanada laga soo dooranayo xildhibaanada Baarlamaanka.
Xildhibaanka ayaa sheegay in aanan loo deyn guddi ama dowlad qaabka loo kala xulayo deegaanada laga soo dooranayo xildhibaanada cusub isagoo ku taliyay in Golaha shacabka uu arrintaas go’aan ka gaaro.
“Qoondeynta kuraasta deegaanada waa arrin qatar ah, waa arrin khilaaf keeni karta, waa arin sedbursi keeni karta, arrintaas waa in xeer baarlamaan lagu soo saaro oo aan guddi loo dhaafin,”ayuu yiri xildhibaanka.
Annagu sabab doorashada dib loogu dhigi karo aan u sheegno waa qalad,waa inaan albaabkaas la furin haddii albaabkaas la furo dad badan ayaa ku qulquli kara.”ayuu yiri xildhibaan Faarax Sheekh.
Sidoo kale xildhibaan Faarax Sheekh Cabdqaadir ayaa ku taliyay in kuraasta Aqalka Sare uu Golaha Shacabka xeer ka soo saaro.
Gabagabadii xildhibaan Faarax Sheekh cabdqaadir ayaa ku taliyay in Maqaamka Muqdisho laga hadlo oo go’aan kama dambeys ah laga gaaro.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa doodo kaleh sharciga doorashooyinka qaran iyadoo doodadahana ay yihiin kuwo ay xildhibaanadu si degen uga hadlayaan fikirkooda ku aadan sharciga doorashooyinka qaran.
Dhinaca kale hadalka xildhibaanka ayaa imaanaya xili Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BJFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu kulan la qaatay guddiga diyaarinta sharciga Doorashooyinka Qaranka, isaga oo ka dhageystay warbixin la xiriirta sharciga Doorashooyinka Qaranka Sidoo kale waxa uu Guddiga Guddoomiyaha faah faahin ka siiyay Akhrinta sedaxaad ee sharciga Oo uu guddigu ku howlanyahay soo diyaarintiisa.